Muxuu qaban karaa Farmaajo afarta sanno ee soo socota ? FAALLO · Jowhar.com Somali News Leader
Muxuu qaban karaa Farmaajo afarta sanno ee soo socota ? FAALLO
by A M | Saturday, Mar 11, 2017 | 2421 views
Soomaaliya waxaa ka taagan xaalad, mid ka mid ah kuwa afduunyada ugu welwelka badan, uguna qatarsan. Qaran burburay oo sal iyo baar ah, marka dhinac walba laga eegana saameeyay amniga iyo nolosha qofka, qoyska ilaa qaranka iyo qaybaha kale ee saldhigga u ah adeegyada ijtimaaciga ah.
Dowladdaha fashilmay marka loo eego xaalada Soomaaliya ka taagan, waxay kaga duwan tahay amniga iyo burburka madaxbannaanida iyo midowga qarameed. Su’aashu waxay tahay, Somalia ma sameyn kartaa isbadal, oo Farmaajo hoggaaminaayo?.Siday nala tahay, Soomaalidu waxay “Isbaddal” u taqaan mas’uul badalay mas’uul kale, laakiin lama yaqaan qoto dheerida macnaha erayga “Isbaddal” marka loo fiiriyo fasiraad siyaasadeed, mid shari ama amni intaba.
Waxaa loo raaci karaa afkaar daraaso cilmi ah ku salaysan, si qoto dheer ahna u bartilmaameysanaysa fahamka iyo qeexitaanka xaaladaha markaas jira oo lagu fulinaayo barnaamijyo wax ka beddel siyaasadeed oo leh abbaar iyo habraac qorsheysan.
Weli lama haayo hoggaamiye ama koox leh falsafad siyaasadeed ama Ayjoolijiyad si waaci ah uga turjumi kara yoolka hiigsiga ah ee isbadalka la wajahaayo qaababkiisa iyo nuxurkiisaba ama aragti iyo ficil ku habeysan istaraatiijad cad oo kama danbeys ah.
Isbadalada dowladeed ee Somalia taariikh ahaan ka dhacay ma ahayn kuwo leh hab-raacaas cilmi, bal matalan waxa kaliya la xusuustaa ay yihiin doorashadii June 1967 C/rashiid Cali Sharma’rke xilka madaxweynenimada Soomaaliya kula wareegay. Waxaa aad loo buun-buuniyay, gaar ahaan beelo si af-dheeri ku taageeraayeen intii uu ku jiray ololahiisa musharaxnimada doorashadiisaa iyo guushiisa kadib.
Wax laga dhigay hoggaamiye wax badali kara, hase ahaatee, labadii sano ee madaxweynaha wadanku ahaa, dilkiisa ka hor, wuxuu asaga iyo ra’iisul wasaarahiisa Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal, waxay wajaheen guuldarooyin taariikhi ah. markii ay si sax ah ula qabsan waayeen filashadii iyo rabitaankii dadweynaha. Waxay sabab u noqdeen inay soo bandhigaan hoggaamin liidata oo aan waxtar lahayn, masuqmaasuq, gacma-gacmeyn dakhliga, xisaababaadka iyo qasnadaha dowladda, si loogu isticmaalo dano siyaasadeed iyo kuwo gaar ahaaneed, doorashooyin dhiig badan ku daata, caddaalad daro iyo bur burin sareynta sharciga iyo iibsashadii qadiyaddii ummadeed, sida NFD.
C/rashiid iyo Cigaal isbadalkii laga filaayay halkaas ayuu maray, waxayna sabab u noqoteen in milaterigu xukunka la wareego.
Isbadlkii kaloo aad loo soo dhoweeyay, rajada fiicanna laga filaayay, waxay aheyd curashadii Kacaanka, Oktoobar 1969. Hoggaankii Maxamed Siyaad Barre, wuxuu isku badalay kaligii talisnimo macangag, wuxuu sabab u noqday fashilka dowladeed ee qaran jabka Soomaaliya oo ilaa hadda loo heli la’yahay dalka, marka laga eego dhinacyada qaddiyadaha madaxbannaanida siyaasadeed, midnimo iyo amniga qaranka, yacnii wuxuu malyan jeer ka sii darray, tii Cigaal iyo C/rashiid lagu eedeynayay, wuxuuna ugu danbeyntii gogol xaar u noqday sawirka xaaladeed ee maanta Somalia ka jira.
Farmaajo Muxuu Badali Karaa?
Dowladdii Xasan Sheekh inkastoo ay aheyd maamul daciif ah, haddana waxqabad taariikhi ah ayaa ka muuqday haba iska yaraadee, sida muuqaalka amni ee Muqdisho, dhismaha maamul goboleedyada iyo dhameystirka ilaa xad habka federaalisimka ee shakiga xoogga badan laga qabo sidii loo waafajin lahaa dhismaha siyaasadeed ee dowladnimada Somalia, diyaarin iyo dib u eegis lagu sameeyay dastuurka si loo qabyo tiro, diyaarintii shuruucda axsaabta siyaasadeed iyo gogol u dhigida shuruudaha xalka mustaqbalka siyaasadeed ee dalka wajahi doono 2020-ka.
Mudane Farmaajo wuxuu dhaxlay waxqabad ka horeeyay, hase ahaatee u baahan wax ku kordhin. Waxaa horyaal dhismaha milateri tayeysan iyo ciidamada QS, la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo amni darrada baahsan, faragelinta siyaasadeed ee beesha caalamka iyo wadamada deriska, midnimo la’aanta qaranimada sida gooni goosatada Somaliland iyo maamul beeleedyada federaalka ah, qatartana ku ah wadajirka, midnimada Soomaaliya iyo horumarka wadaniga ah, shaqo la’aanta iyo tayo xumada waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada aasaasiga ah.
Maxay Tahay Aragtida Farmaajo Ee Ku Wajahan Arrimahaan Soo Sheegnay
Horta ma jirtaa aragti si cilmi ah u qeexan ee uu ku wajihi karo isbeddelka lagama maarmaanka ah? Ilaa hadda lagama haayo barnaamij siyaasadeed oo qeexaya afkaar wadani ah. War kooban, waxaa laga sugayaa inuu xal u helo mudada uu xilka haayo, waxqabad lagu qanci karo, kuna saabsan qabyo-tirka iyo dhameystirka dastuurka kmg ah iyo qaddiyaadka waaweyn ee masaa’ilka xaaladaha xasiloonida siyaasadeed, midnimada iyo amaanka qaranka. Aftida dadweyne ee loo qaadayo dastuurka, tirakoobka dadka iyo duunyada, dhismaha axsaabta siyaasadeed, si looga gudbo nidaaamka guracan ee awood qeybsiga beelaha iyo ugu danbeyn doorashooyin qof iyo cod.
Dhanka kale, Farmaajo waxaa laga sugayaa Somalia oo ka madax banaan faragelinta shisheeyaha iyo damaca guracan ee dowladdaha deriska, Somalia oo dal ahaan mideysan iyo xal u helida su’aasha federaalka macho ahaan lagu jahwareersan yahay, amni sugan iyo Somalia oo nabad ah.
Hiil Qaran: Dekedaha Berbera, Boosaaso